May 2016 – Radio KeyFM
Dowladda Kenya iyo Yuganda kawada hadlaayaan 4 Kenya ah oo lagu xukumay Uganda
31st May 2016	Somali Language 0
Dowladda dalka ayaa wadahadal kula jirto dalka Uganda arimo kuaadan 4 Kenyan ah oo maxkamad ku taala dalka Uganda ku heshay dambi kuwaasi oo lala xiriiriyay qaraxyo argagaxiso oo ka dhacay caasimada Kampala sanadkii 2010. Wasiirka arimaha dibada Amina Mohamed ayaa sheegtay in ay wada xajood kula jiraan dowladda Uganda …
Laba jiif ku-xigeen oo lagu eedeeyay musuqmaasuq oo sharciga lala tiigsano doono
Laba jiif ku-xigeen ee kauntiga Isiolo ayaa lala tiigsano doona sharciga kadib markii lagu eedeeyay in ku lug lahayeen arimo musuqmaasuq ah goor ay socotay kala shaandhaynta kaarka qaranka ee kauntigaasi. Gudoomiyaha amniga kauntiga Isiolo George Natembeya ayaa sheegay in labada jiif ku-xigeen ayaa lashaqeeynayeen odayaal si sharci darro ah …
Nin xaaskiisa tooreeyay oo lagu xukumay 20 sano xabsi ah
Kauntiga Wajir ayaa nin xaaskiisa tooray dhabanka kaga duray ayaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. Mohamed Deeq ayaa lagu helay dambi ah in uu dhaawac culus ugeestay xaaskiisa Fatuma Ibrahim, oo 32 sano jir ah. Dhacdadaank ayaa kadhacaday deegaanka Khorof Harar, 6-da January ee sanadkaan, ayadoo arinta lala …
Booliska oo raadinayan gabar musqul ku riday ilmo
Booliska kauntiga Marsabit ayaa baadi good uga jiro gabar 16 sano jir ah oo laaminsanyahy in ay cunug yar ay dhasahy musqul kutuurtay tuulada Dub Gomba ee kauntigaasi. Taliyaha booliska Marsabit Mark Wanjalla ayaa sheegay in dadka tuulada degan ay jiifka soo waregeliyeen kadib markii ay arkeen meydka cunuga yar …
Arday rasaas lagu dhawacay oo xaladeedu soo ficnaanayso
Gabar arday ah dhigato dugsiga sare gabdhaha ee Ulanda oo usbuuci lasoo dhaafay rasaas ay ku dhaawaceen ilaalo katirsan xabsi kuyaala magaalada Migori ayaagoo kuraadt joogay nin xabsiga kasoo baxsaday ay lasheegay in ay xaladeedu caafimaad soo ficnaanayso kadib markii qallin lagusameeyay. Ardaydaasi,Quinter Adhiambo Omondi ayaa lashegay rasaasta in ay …
Xarumaha caafimadka kauntiga oo looga cabanayo daawo xumo
Dadka kudhaqan kautinga Isiolo ayaa kacabanayaa daawo iyo daryeel caafimad xumo ee xarumaha caafimaadk kauntiga taasi oo kuqasabtaa in ay kaibsadaan farmashiyaasha gaarka loo leeyahay. Mr Abdi oo kamid ah dadka deegaanka kudhaqan ayaa sheegay in daawo laanta ay dhibaato weyn kuhayso dadka miiyiga kudhaqan, asagoo kudaray in dadkaasi ay …
Boqolaal ka tirsan Booliska oo shaqadooda weynaya
Ugu yaraan ilaa 300 oo saraakiil boolis ah,kuna guul daraystay in ay u gudbiyaan xisaabadkoda M-pesa iyo Bankiyada,gudiga adeega booliska qaran ayaa laga saari doonaa adeega booliska. Gudoomiyaha NPSC,Johnston Kavuludi ayaa sheegay,saraakiisha gobolka xeebta iyo qaybaha kale ee dalka ee ay siiyeen wakhtiga si ay usoo gudbiyaan dokomintiyadooda ay ku …
Dowlada oo mamnuucday in mucaaradka ay xuska Madaraka Day ay ku qabtaan Uhuru Baak
Gudiga katala-bixinta amaanka qaranka ayaa amray in isku-soo-bax siyaasadeed ama mid diimeed aan lagu qaban karin maalinta xuska Madaraka Day,beerta xoriyada (Uhuru Park) ama garoonka (Nyayo Stadium). Amarka ayaa imaanaya,iyada oo isbahaysiga Cord uu sheegay in ay isugu soo bixi doonaan maalinta Madaraka Day,beerta xoriyada Uhur Park,si la mid ah …
Nkaissery oo Digniino u jeediyay Isbahaysiga Cord
30th May 2016	Somali Language 0
Wasiirka arimaha gudaha,Joseph Nkaissery ayaa sheegay in ay talaabo adag ka qaadayaan mucaaradka,isaga oo digniino hor-leh usoo jeediyay. Nkaissery ayaa sheegay in dowladu ay isticmaalayso awood aad u yar,aysana weli arag awooda booliska. “ Waxaynu siinay dadkan fursado badan oo ay khaladaad ku sameeyaan , waa in ay joojiyaan ama …
Koox lagu Tuhmayo Alshabab oo Dad ku dilay Kowntiga Kwale
Ilaa Saddex qof ayaa lagu dilay shalay deegaanka Ukunda ee kowntiga Kwale,sida ay sheegeen booliska kowntigaasi. Booliska ayaa tilmaamay in dadka la dilay ay kala yihiin Juma Mwanyota oo ah madaxii tuulada,Hassan Mwasani oo ahaa sarkaal ciyaaraha iyo Mohammed Mwanguzi. Subaxnimadii hore ee shalay ayaa Saddexdan qof lagu dilay guryahooda …